Ndị na-emepụta agba agba n'okporo ụzọ | China Road akara Agba Factory & Suppliers
—— Agba Akara Agba ——
Thermoplastic Road Ime Agba
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ nke thermoplastic ụzọ Ndinam agba. Ọdịdị ： Enweghị ahịhịa, ntụpọ, ọnya, mgbape, gbanyụọ, taya taya, agba nke ọdịdị juputara kwesịrị imechi ka ọkọlọtọ; mmiri na-eguzogide: Ọ dịghị ndiiche phenomena 24 awa mgbe a gbanyere mmiri na mmiri.
Ihe Igwe Na-egosi Linear Thermoplastic
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ nke thermoplastic vibrating akara-akara agba. agba vibrant thermoplastic ụzọ marking agba nwere thermoplastic resin, gbanwetụrụ roba, fillers, na pụrụ iche ihe na ndị ọzọ bekee. Ọ na-mepụtara na ndabere nke na-achụ elu visibiliti na vibration. A na-etinye ya na etiti okporo ụzọ (akara ndị amachibidoro iwu), akara okporo ụzọ, ịgafe usoro nkwụsị, na ihe ndị ọzọ.